Thursday,7January 2010 - Posted by Shwe Thiri Khit
ဒီနေ့တော့ ဘာရယ်မဟုတ် အပျင်းပြေစိတ်ထဲရှိတာ ချရေးပါရစေ။ ငယ်ငယ်ကပုံလေးတွေ ပြန်ကြည့်ရင်း ကြည်နူးရင်း ပြန်သတိရလို့နေတယ်။ ကလေးဘ၀မှာ ကျော်ဖြတ်ခဲ့ရတဲ့ အချိန်အစိတ်အပိုင်းတော်တော်များများကိုလည်း ခုထိမမေ့သေးဘဲနဲ့ သတိရနေတုန်းပဲ။
လူတော်တော်များများကမေးကြပါတယ်။ ဖန်တီးရေးဆွဲထားတဲ့ပုံလေးတွေက ရွှေခေတ်နဲ့တော်တော်တူတယ်။ ကိုယ့်ပုံကိုယ်ပြန်ဆွဲထားတာလား? တဲ့...။ ဟုတ်ပါတယ်။ Artist ကိုယ်တိုင်က self-expression တယောက်ဖြစ်နေတာကြောင့်ရယ်၊ artist (သို့) painter တယောက်ဟာ portrait ရေးဆွဲတဲ့အခါမှာ များသောအားဖြင့် ကိုယ့်ပုံနဲ့သွားတူနေတတ်တယ်။
ဒီ artwork လေးတွေကတော့ ငယ်ငယ်တုန်းက အဖြစ်အပျက်များနဲ့ ငယ်စဉ်ဘ၀ကို ပြန်လည်အောင့်မေ့သတိရလို့ ဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ပင်ကိုယ်ဗီဇဖြစ်တဲ့ ပုံရေးဆွဲခြင်းနဲ့ ရသအနုပညာချစ်မြတ်နိုးမှု တွေကလွဲလို့ ငယ်ငယ်တုန်းက ကျွန်မနဲ့ အခု ကျွန်မဘာတွေများကွာခြားနေပါလိမ့်? တော်တော်များလိမ့်မယ်နော်.. ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ၁လသမီး၊ ၁နှစ်သမီး၊ ၂နှစ်သမီး၊ ၃နှစ်သမီးမှမဟုတ်တော့ဘဲ.... ဘာတွေကွာခြား၊ ဘာတွေတိုးတက်လာတယ်၊ ဘာတွေပျောက်ကွယ်သွားတယ်ဆိုတာ.....
Labels: childhood, new painting releases
ငယ်ငယ်က ကလေးဝဝလေးက သီရိလား အရမ်းချစ်စရာကောင်းတယ်..။
သီရိရဲ့ အနုပညာ အရုပ်ပုံလေးတွေကတော့ သီရိနဲ့တော်တော်လေးတူတယ်။ အရုပ်ပုံလေးတွေကြည့်ပြီး သီရိက အပြင်မှာ တော်တော်တည်မဲ့ပုံဘဲလို့ ထင်မိတယ်..။ အနုပညာဆိုတာ ကိုယ်စိတ်ရဲ့ တစ်စိတ်တဒေသမို့လို့လေ.....။
မြတ်မွန် on7January 2010 at 17:00
မေမြို့မှာ နေခဲ့ဖူးတယ် ထင်တယ်။။
PAUK on 8 January 2010 at 08:53
ရွှေခေတ်က အတွေးသမားဆိုတော့ တည်နေမှာပေါ့နော်။ အဲလိုတည်နေတဲ့အချိန်မှာ ပုံဖန်တီးလိုက်တော့ ပုံလေးတွေပါတည်သွားတာပဲဖြစ်ရမယ်။ ဘာလေးပဲဖြစ်ဖြစ် တွေးတောဆင်ခြင်ရတာတွေသဘောကျပါတယ်။
သူငယ်ချင်းအသစ်တွေဆီက comment တွေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ နောက်နောင် post တွေအတွက်အားတရပ်ဖြစ်စေပါတယ်။
Shwe Thiri Khit on 8 January 2010 at 17:19
မေမြို့မှာ မနေခဲ့ဖူးပါဘူး။ အလည်လောက်တော့ရောက်ဖူးပါတယ်။
အခုတင်ထားတဲ့ပုံတွေအများစုက နေခဲ့ဖူးတဲ့ ရန်ကုန် ရွှေဂုံတိုင်အိမ်က ပန်းခြံထဲမှာရယ်၊ တခြားအပြင်ပန်းခြံမှာရိုက်ခဲ့တာတွေပါ။း)
Shwe Thiri Khit on 8 January 2010 at 17:23